Ninkii nabiga (scw) aflagaadeeyay oo gurigiisa dab la qabadsiiyay. | Somaliska
Ninka lagu magacaabo Lars Vilks ee aflagadeeyay nabiga Muxamed (nnkh) ayaa dab la qabadsiiyay guriisa asagoo xiligaas ka maqnaa guriga. Dabka ayaa ka kacay markii shidaal iyo dab isla socda daakhada looga soo tuuray guriga dabka ayaa burburiyay daaqadaha iyo daahyada. Dhacdadaan ayaa imaaneysa maalmo uun ka dib markii ninkaan laftiisa lagu weerary magaalada Uppsala 11-kii Bishaan. Ayadoo sidoo kale maalin ka dib websitekiisa la jabsaday. "Dhaawucu wuu yaryahay, daaqadaha ayaa madoobaaday , dabka ayaa iskiis isaga damay" ayay tiri afhayeenka booliska. "Tani waa mid ay tahay in aan ku noolaado" ayuu yiri Vilks. Ninka ayaa hada la sheegay in uu guriga ka guurayo. Xigasho: Radio Sweden
Ninka lagu magacaabo Lars Vilks ee aflagadeeyay nabiga Muxamed (nnkh) ayaa dab la qabadsiiyay guriisa asagoo xiligaas ka maqnaa guriga. Dabka ayaa ka kacay markii shidaal iyo dab isla socda daakhada looga soo tuuray guriga dabka ayaa burburiyay daaqadaha iyo daahyada.
Dhacdadaan ayaa imaaneysa maalmo uun ka dib markii ninkaan laftiisa lagu weerary magaalada Uppsala 11-kii Bishaan. Ayadoo sidoo kale maalin ka dib websitekiisa la jabsaday.
“Dhaawucu wuu yaryahay, daaqadaha ayaa madoobaaday , dabka ayaa iskiis isaga damay” ayay tiri afhayeenka booliska.
“Tani waa mid ay tahay in aan ku noolaado” ayuu yiri Vilks.
Ninka ayaa hada la sheegay in uu guriga ka guurayo.